အားကစားလိုက်စားသူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး fitness rubber band Fitness Rubber band ကို သုံးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အိမ်မှာလဲ အလွယ်တကူ လုပ်လို့ရပါတယ်နော်…..
2 way dish cleaner
ပန်းကန်ဘဲဆေးဆေး မီးဖိုချောင် သန့်ရှင်းရေးဘဲ လုပ်လုပ် လုံးဝလက်ကို ဆပ်ပြာမထိတော့တာမို့ အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်တဲ့ 2way dish cleaner လေးပါနော်…ဆပ်ပြာရည်က auto ကျနေမှာမို့ အိုးခွက်ပန..
သင့်ဖုန်းကင်မရာကို professional camera ကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်ပေးမဲ့ phone lens လေးတွေပါ Lens အမျိုးအစား ၃မျိုး ပါပါတယ်ရှင် အရောင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် ..
တစ်အိတ်ထဲနဲ့ ၃မျိုးတောင် သုံးလို့ရတဲ့ ချစ်စရာ မွှေးပွ အိတ်လေးပါရှင် ဒီလို ခပ်မိုက်မိုက်စတိုင်နဲ့ ခါးမှာ ပတ်ပြီးလွယ်လို့ရပါတယ် ဒီလိုလေး တည်ငြိမ်သူမမ စတိုင်နဲ့ လက်မှာ ချိတ်လို့ရတယ်နော်.. ချစ်စရာကောင်..
မိန်းကလေးတို့ အကြိုက် ချစ်စရာ flower airpod cover လေးပါရှင် အားသွင်းမဲ့ အပေါက်လဲ ပါတာမို့ cover ချွတ်ပြီး အားသွင်းစရာမလိုပါဘူးရှင်..
Antibacterial Chopping Block
အသီးအရွက်တွေ လှီးဖို့သက်သက် မဟုတ်ဘဲဒီလိုအောက်ခံအခွက်လေးပါ ပါတော့ အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Chopping block လေးပါနော်…အာက်ခံခွက်လေးကို ဖြုတ်ထားလို့လဲရပါတယ်နော်...ရိုးရိုးစဉ်းတီတုံးတွေ သုံးနေ..
Bear Food box
Bear Food Box လေးနေကြာစေ့လေးစားရင်းရုပ်ရှင်ကြည့်မလား… အခွံလေးတွေ ပစ်လို့ရတဲ့ layer လေးလဲပါတော့ အဆင်ပြေဆုံးနော်..သင့် အနားယူချိန်တိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် Bear food boxအလွယ်တကူလဲ ဖြုတ်ပြီး ဆေးကြောနိုင်ပါတယ..
ရိုးရှင်းနေတဲ့ သင့်ကားကို အရောင်စုံ atmosphere lightနဲ့ ဒီလို အလှဆင်လိုက်ပါနော်.. သင့်ကားအတွက် အရောင်စုံ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်..
Car Reading LED light (CA1)
Color classification: Beige-White / Beige-Ice/Black- White / Black- Ice/Gray- White / Gray- IceCharging Time - 4-5 hrs Lighting colour- White / Blue Ice..
Car Truck Storage Box
ခရီးသွားရင် မုန့်တွေအများကြီးသယ်ရမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Car Trunk Storage Box လေးလာပီနော်။ Srewလေးတွေလဲထည့်လို့ရတော့ အဆင်ပြေမှ ပြေပဲ။ ကားနောက်ဖုံးထဲမှာရှုပ်ပွနေအောင် ထည့်မယ့်အစားဒီလို Box လေးနဲ့ ထည့..
သုံးရလွယ်ကူပြီးချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ Storage Box လေး။ ထည့်သလောက်လဲဆန့်ဝင်ပြီးအရောင်ကလဲသုံးမျိုးရတယ်နော်။ ခေါက်ရသိမ်းရလွယ်ကူတော့ အသုံးတည့်တဲ့ ပစ္စည်းကောင်းလေးတခုပါ။..
ကိုယ့်ရဲ့ pet လေးတွေကို ကိုယ်နဲ့မကွာ ခေါ်သွားနိုင်မဲ့ ချစ်စရာ ကျောပိုးအိတ်လေးပါနော်ချစ်စရာ Desing စုံ လဲ ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နော်....